3D Wall Muenzaniso
Sezvo isu tese tichiziva, machena ndeye ...
Zvakanakira mar ...
Vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza ...
Iko kushandiswa kwenzvimbo materi ...
Xiamen Morningstar Dombo Co ...
Sezvo isu tese tichiziva, marble yakanaka yegiredhi chigadzirwa.Saka mhuri zhinji dzinoshandisa machena mune yavo yekushongedza, uye marble ine chaiwo marble uye faux marble. Uye kunyangwe iri marble ekugadzira kana marble echisikigo ine zvayakanakira nezvayakaipira. Nhanganyaya Chakagadzirwa machena ini ...
Kubatsira kwematare machena
Vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza kushandisa machena machena nekuda kwechitarisiko chayo chakanaka uye akawanda akanaka maficha. Chekutanga, kuomarara kwakanyanya. Hazvisi nyore kushanduka. Natural marble ndeyekupfuura makore marefu kuti igadzire zvakasikwa. Saka zvakasikwa zvakaenzana muchimiro chayo. Uye kuwedzera kwakaenzana ...
Iko kushandiswa kwemidziyo yemuchadenga kuri kugara kuchiunza izvo zvitsva, uye zvakasiyana siyana zvekuvakisa zvakapinda zvishoma nezvishoma mumuono wedu. Runako rwemabhuru haruna kudzikira kubva panguva dzekare. Iyo marble yemamiriro akanaka emhepo inoshongedza, kungofanana neicho hunyanzvi icho hunhu hunova, hunogona kusangana mu wh ...
ne admin pane 19-09-24
Xiamen Morningstar Stone Co, LTD yakavambwa muna Mbudzi 23, 2017 uye yakanyoreswa muXiamen, guta rakanaka rechitsuwa, rinonyanya kuverengerwa mumarudzi ese emarble emazuva ano, girenayiti, mbiru dzakasarudzika, nezvimwewo. .